वानप्लस सेभेन टी प्रो नेपालमा, मूल्य एक लाख « TechPana | Digging into Tech
सोमबार, मंसिर १६, २०७६ ११:५५
तपाईंको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? यसरी
चीनबाट कति आउँछ नेपालमा इन्टरनेट ?
वानप्लस सेभेन टी प्रो नेपालमा, मूल्य एक लाख
वानप्लसको फ्ल्यागसीप स्मार्टफोन ‘वानप्लस सेभेन टी प्रो’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । ६.६७ इञ्च कर्निङ गोरिल्ला ग्लास युक्त फ्ल्यिुड एमलोड डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन भर्खरै नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको हो ।
फोनमा स्न्यापड्रयागन ८५५ अक्टा कोर प्रोसेसर राखिएको छ । ७ एनएम एन्डरोनो ६४० चिपसेट रहेको फोनमा एन्ड्रोइड १०.० र अक्सिजन ओएस १०.०.४ रहेको छ । वानप्लस सेभेन टी प्रोमा स्टोरेजका लागि दुई सय ५६ जीबी यूएफएस ३.० स्टोरेज र ८ जीबी एलपीडीडीआरफोरएक्स र्‍याम रहेको छ ।
मोटोराइज्ड पप अप १६ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा रहेको फोनमा ४८ मेगा पिक्सेलको मूख्य क्यामेरा राखिएको छ । त्यसका साथै १६ एमपी अल्ट्रावाईड, ८ एमपी, तीन गुणा अप्टिकल जुम, पीडीएएफ, लेजर एएफ, ओआईएस डुअल एलईडी फ्ल्यास, एचडीआर र पानारोमा जस्ता विशेषता समेत यसमा रहेका छन् ।
यसैगरी सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै वानप्लस सेभेन टी प्रो मा ०.२८ सेकेण्डको फेस अनलक र अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ । फोनमा ४ हजार ८५ एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य ९९ हजार नौं सय ९९ रुपैंया रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले नेपालकै पहिलो एण्ड्रोइड टीभी सार्वजनिक गरेको छ । नेपालकै ठूलो औद्योगिक
जेड फ्लिपजस्तै फोल्डेबल स्मार्टफोन ल्याउँदै ह्वावे
एजेन्सी । गत वर्ष ह्वावेले पनि सामसङ ग्यालेक्सीको जेड फ्लिपजस्तै फोल्ड गर्न मिल्ने फोन बनाउने
भर्चुअल लाइभ इभेन्ट आयोजना गर्दै सामसङ, यसरी हेर्नुहोस् लाइभ
काठमाडौं । सामसङले ग्यालेक्सी अनप्याक भर्चुअल इभेन्टको आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी अगस्ट
एआर प्रविधियुक्त पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै वानप्लस
एजेन्सी । वानप्लसले लामो समयदेखि आफ्नो मिड रेञ्जको स्मार्टफोन नोर्डको लामो समयदेखि विज्ञापन गर्दै आइरहेको